Somaliland: Garabyada Xisbiga Kulmiye Ku Loolamayay Oo Heshiis Gaadhay
Home Somali News Somaliland: Garabyada Xisbiga Kulmiye Ku Loolamayay Oo Heshiis Gaadhay
Garabyada ku loolamaya musharaxnimada Kulmiye ayaa ka heshiiyay arrimihii lagu muransanaa kadib kulamo labada dhinac gooni-gooni ula yeesheen madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo.
Labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la galo tartan xor ah oo ka dhaca xisbiga gudihiisa, sidoo kalena la magacaabo guddi hogaanka xisbiga ah oo qabanqaabisa shirka golaha dhexe ee xisbiga oo loo qoondeeyay bisha November 10-keeda. Waxay guddidu ka koobnaanaysaa hogaanka xisbiga iyo wasiirka gaashaandhiga.
Xalkan oo lagaga dhawaaqay kulamo labada garab ku yeesheen xarunta xisbiga ayaa ka dambeeyay kulan madaxweyne Siilaanyo shalay la yeeshay Muuse Biixi iyo kulan uu isla maanta la yeeshay garabka kale ee Maxamed Biixi Yoonis, Cabdicasiis Samaale iyo xildhibaan Kijaandhe.
“Waxaa lagu heshiiyay in xisbigii Kulmiye xisbigiisii yahay, in hogaankiisu sidiisii yahay, shaqadii socotayna wixii la qabtay dib loo eegi karo, cidda hawshaas qabanaysa ee dhammaystiraysaana tahay hogaanka xisbiga, waxaana lagu kordhiyay Wasiir Axmed Xaaji Cali Cadami oo la talinaya,” ayuu yidhi Wasiir Cukuse oo ku dhawaaqay go’aanka.
Waxa uu intaasi raaciyay Wasiir Cukuse
“Hawsha waxaa qabanaya guddoomiye xigeenka koowaad Maxamed Kaahin, guddoomiye xigeenka labaad Xildhibaan Waabeeye, kuxigeenka saddexaad Xildhibaan Cabdiraxmaan Talyanle iyo xoghayaha guud Xasan Siciid. Arrinta odhanaysa madaxweynaha ayaa guddi magacaabay waxba kama jiraan. Madaxweynuhu wuxuu ku dedaalay in xisbigu isku soo dhawaado, hogaanka xisbigana aan waxba laga bedelin ee saaxad dimuqraadi ah loo abuuro. Saaxaddaas dimuqraadiga ah ee golaha dhexe musharaxiintu ay ku tartami karto,” ayuu yidhi wasiir Cukuse
Guddoomiyaha Kulmiye Muuse Biixi ayaa sheegay in heshiiska iyo midnimada tahay caadada Kulmiye, wuxuuna tilmaamay in hadda ay midaysan yihiin dhinacyadii dhawaan kala tagay
“Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saaxiibadayada naga yara cadhooday ee aanu soo ladqabaysanay oonu is fahanay, waa inoo midnimadii Kulmiye. Waa inoo tartan xalaal ah,” ayuu yidhi Muuse Biixi.
Maxamed Biixi Yoonis, wasiirka khaarajiga ahna musharax ayaa isna yidhi
“ Waxaa farxad noo ah anagoo gabi ahaantayo ogol in meeshaa Kulmiye la yidhaahdo ahaado xisbi xaakimkii, in midnimada xisbigu muqadas naga tahay, in nabada wadanku muqadas naga tahay, inaanu jecelahay tartan xalaal ah oo xor ah oo loo siman yahay inuu dhaco. Anigoo musharax Kulmiye ah waxaan caddaynayaa in dhammaanto aanu isku raacnay in tartan xalaal ah uu dhaco,” ayuu yidhi Maxamed Biixi.
Garabka musharaxiinta isbahaystay ayaa si weyn u doonayay in shirka golaha dhexe loo saaro guddi qabanqaabo halka garabka Muuse rabay in hogaanka xisbigu wado hawlaha qabanqaabada shirkaasi.
Somaliland: Madaxwayne Silanyo Iyo Wafti Uu Hogaaminayo Oo Goor U Dhaw U Baxaya Magaalada Borama Ee Xarunta Gobolka Awdal Iyo Ujeedada Socdaalkooda